Semalt Expert: Manala ny Darodar amin'ny Google Analytics
Ny Google Analytics dia mitatitra tranokala maromaro ho tsy mendrika sy tsy azo antoka. Iray amin'ireny ny Darodar.com; Ny tatitra vao haingana dia manambara fa tsy nandefa mpitsidika tena izy tao amin'ny tranonkalan'ny mpanjifa. Midika izany fa tsy misy ifandraisany amin'ny tena maha-marina ny fandaharam-pikarakarohan-tserasera fototra toy ny robot iray izay manalokaloka ny antontan'isa momba anao.
Raha jerena ny fizotran'ny Google Analytics ao amin'ny fizarana an-tsoratra rehetra, dia ho hitanao fa ny famaritana an'i Darodar.com dia manimba ny tranokalanao sy ny tatitra Analytics. Ao anatin'ireo tatitra rehetra, Darodar dia mampiseho mpitsidika vaovao avy amin'ny IP vaovao, ary ny taham-pifanampiana dia zato isan-jato, izay zava-dehibe amin'ny webmasters. Azonao atao ihany koa ny mahita fa Google no nitatitra ny Darodar sy ny serivisy rehetra miaraka aminy. Noho izany, ny fehin-kevitra dia tsy tokony ampiasaina amin'ny serivisy ny tranonkala.
Max Bell, Semalt Mpitantana Success Manager, dia milaza fa marina tokoa fa ny mponin'i Darodar dia mandefa mpitsidika vitsivitsy monja isam-bolana, ary ireo dia antsoina rehetra..Ny ankamaroan'ny mpitsidika dia sandoka; Na izany aza dia azonao atao ny manombatombana ny totalin'ny fomba fijery manokana momba anao ary tsy tokony hiankina amin'ny tatitra nataon'i Darodar. Zava-dehibe koa ny tsy miankina amin'ny fitsidihany satria tsy misy izy ireo. Raha mampiasa tolotra blôgy fampiantranoana toy ny Blogger sy WordPress ianao, dia mora aminao ny manakana an'i Darodar. Noho izany, tokony hampiato ny mpizara anao amin'ny alàlan'ny fandraisana fifamoivoizana sy tranokala hafa mitovy amin'izany ianao.
Tsy mora ny fanesorana an'i Darodar
Marina fa tsy mora ny manala an'i Darodar. Tsy maintsy mikarakara zavatra be dia be ianao. Ny dingana voalohany dia ny miditra ao amin'ny kaonty Google Analytics ary jereo ny fizarana admin eo amin'ny farany ambony havanana. Ny dingana manaraka dia ny hamoronana filters na ny fitadiavana ny sivana izay efa eo amin'ny zoro havanana. Raha tsy namorona ny sivana ianao dia tokony mamorona azy ireo ary mahazo miditra amin'ny sehatra fitantanana. Ny dingana fahatelo dia ny fanindriana ny safidy sivana ary hamela ny tenanao hanamboatra filaharanao manokana amin'ny data Google Analytics. Eo am-piandohana, izany rehetra izany dia haka fotoana kely, fa rehefa mametraka ny tenanao ianao ary mamorona filipa maromaro, dia ho mora aminao ny hahita fitsidihana manokana ao amin'ny tranonkalanao. Azonao atao ny manova ny saha mifototra amin'izay efa nataonao. Ny hany tanjona dia ny manaisotra an'i Darodar sy ny fomba fijeriny izay mety miditra amin'ny fizotran'ny sivana. Eto ianao dia mila manakana izany ary tsindrio ny safidy save mba hitehirizana ny fanovana rehetra. Ny sivana ataonao dia hanokana fotoana hialana amin'ny fiainana. Aza hadinoina fa zava-dehibe avokoa ireo dingana rehetra ireo. Raha nahazo fahazoan-doka sandoka ianao ary tsy nahalala na inona na inona momba ny antontan'isao, dia tokony hanakana ny adiresy IP anao ianao raha vao namorona sivana. Izany rehetra izany dia hiantoka fa ny vohikalanao dia mandray ny fitsidihan'ny olona marina sy tena marina na dia vitsy monja aza izy ireo. Ho an'ny fanavaozam-baovao marobe, tsy maintsy manohy manamarina ny tranokalantsika isika ary mamaky ireo lahatsoratra farany Source .